Warbixin: Qarax Xoogan oo ka dhacay duleedka wasaarada Amniga - Hablaha Media Network
Warbixin: Qarax Xoogan oo ka dhacay duleedka wasaarada Amniga
HMN:- Qarax gaadhi ayaa ka dhacay banaanka hore ee maqaayad lagu iibiyo “Coffee” oo ka soo horjeeda Wasaaradda Dhalinyaradda iyo cayaaraha ee ku taalla magaalladda Muqdisho.
Sidoo kale halka qaraxa uu ka dhacay, waxaa ay 100 meters u jirtaa xaruunta wasaaradda amniga gudaha, waxaana halkaas lala eegtay qarax aad u miisaan cuslaa.
Ugu yaraan shan ruux ayaa ilaa iyo hadda la ogyahay in ay ku geeryoodeen, halka 8 kalana ay ku dhaawacmeeyn, sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal halkaas ku sugnaa.
Sarkaal ciidamadda amniga ka tirsan ayaa sheegay in qaraxa uu ruxay xaafadaha ku teedsan Wasaaraddaha iyo xaruumo ganacsi, waxaa jidadka Muqdisho lagu arkayaa Ambalace­ta gargaarka deg deg ah oo soo daabuleyso dadkii waxyeelada soo gaartay.
iLaa hadda ma jirto cid sheegatay qaraxaas, balse waxaa la qiyaasayaa inay ka dambeeyaan ururka Al­Shabaab oo markasta dhibaato ka geysto Soomaaliya.